Ninka u Qaabilsan Jwxo-shiil, Faafinta Qoraalada Dibada ee Afka Qalaad – Rasaasa News
Ninka u Qaabilsan Jwxo-shiil, Faafinta Qoraalada Dibada ee Afka Qalaad
Jul 15, 2010 Faafinta Qoraalada Dibada ee Afka Qaladaa, Ninka u Qaabilsan Jwxo-shiil
“Qabridahare gabadh yar baa lagu fuulay, Qabridahare dad badan baa lagu xidh xidhay, Qabridahare Odayaal baa lagu garaacay, Qabridahare raashinkii baa laga jaray, Qabridahare khadadkii telefoonada ayaa laga jaray” sidaasi waxaa qora Axmed Cali http://www.ogaden.com
Waa kuma Axmed Cali, waaa qoraaga bogga Internetka ee ogaden.com, waa nin dhalinyaro ah oo ku dhashay degamada Afmado, kuna koray magaalada Kismayo.
Kolkii la aasaasay bogga iyo ideecadii ogaden xoriyo ayaa waxaa uu ka mid ahaa dhalinyaro kolkaas la islahaa internetka ayey wax ka yaqaanaan oo laga codsaday in ay wadaan radiyoga iyo bogga ogaden.com.
Waxay Jabhadu u guurisay gabadh reer Addis Ababa ah, si ay ugu turjunto qoraalada afka xabashiga ah. Runtiina waxaa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo aad ugu shaqeeya Jabhada, balaayose waxay timid kolkii ay Isqabteen Dr. Dolal iyo Jwxo-shiil, xiligaas ayaana la bartay Axmed Cali beesha uu Ogadeen ka yahay.
Xiliyadii uu khilaafku horta lahaa Axmed, waxaa uu bilaabay ama loo sheegay in uu ka saaro waraysiyadii Dr. Dolal ee Ideecadaha caalamiga kuna jiray Radiyo Xoriyo iyo waliba sawiradii Doktorku lahaa ee laga qaadi jiray kolka uu shirarka jabhada ka qayb galo. Khilaafka oo aan waynaanin ayaa taariikhda Dr. Dolal, waxaa uu wiilku ka tirtiray kaydka Jabhada. Arintaas oo aad uga soo horjeeda nidaamka wadaniyada iyo xurmada taariikhda ee uu qofku leeyahay, waxaa Ina Cali kala waynaatay qabyaalada.
Waxay dadku rumaysan yihiin, Axmed in uu ahaa ruuxii sawirada mayka Dr. Dolal u diray bogga Kilalka ee eegga.com. Iyada oo ayna cidna ogaan dhimasha Dr.Dolal ayuu tacsidiisa si kam ah u soo galiyey galabnimadii Jamcaha ahayd ee ka horaysay fiidnimadii TV Itobiya laga sheegay dhimashada Droktorka.
Warbixintii ay qortay guddigii daba galka dilka Dr.Dolal, waxaa lagu sheegay in wadaha bogga ogaden.com, uu ka mid ahaa dadkii xog ogaalka ahaa ee la socday dilka Droktorka.
Bogga ogaden.com, kolkii laga qoray arimo badan oo la xidhiidha dilkii Droktorka, ayaa waxaa uu Axmed badalay surferkii hore uu u isticmaali jiray iyo waliba dhisaynka bogga [design], si aan loo helin waxyaabihii ku luglahaa Droktorka.
Xiligaa wixii ka dambeeyey waxaa uu raad gadsho awgeed joojiyey luuqada Somaliga in uu wax ku qoro, waxaana uu qoraa dacaayado inta badan ku wajahan gabalka Qoraxeey. Axmed wax uu yahay iyo jabhadnimadiisa waan fahamsanahay, waxyaabaha aan mudnayn ee qabyaalada ah ee uu galayna waynu ka warhaynaa.
Hadaba, hadii uu maanta bilaabay dacaayado raqiis ah oo uu ku aflagaadaynayo gabdhaha reer qoraxay isaga oo isleh iska dhig wax sheegaya dhibaato lagu hayo reer Qoraxeey, ha ogaado in reer Qoraxeey ay nabad qaateen, oo hadii ay Itobiya dad u waxyeelaynayso Jabhad in kuwa la dhibaatayn ay yihiin Jwxo-shiil iyo magaalada uu sheegto oo xasarada oo dhan iyadu wada, waana in uu iyada sheego dhibka lagu hayo.
Hadii uu arimahaas ka tanaasuli waayo, waxaa dhab ah in dadweynaha reer Qoraxeey ee uu kula nool yahay North America in ayna ku faraxsanayn dacaayadaha danta leh ee uu Axmed Ali ka fidinayo dadweynaha reer Qoraxeey.
Madaxweynaha Ismaamulka Somalida oo la Filayo in Arbacada la Magacaabo
Waxaa Socota Hadal-hayn ah, in Jwxo-shiil, Laga Masaafurin Doono Dalka Ingriiska